एमाले-माओवादीबाट फेरी थपिए ३ मन्त्री ! हेर्नुहोस् क-कसले कुन-कुन मन्त्रालय पाए ? — Sanchar Kendra
एमाले-माओवादीबाट फेरी थपिए ३ मन्त्री ! हेर्नुहोस् क-कसले कुन-कुन मन्त्रालय पाए ?
प्रदेश ५ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको छ । यसअघि ३ सदस्यीय मात्रै रहेको मन्त्रिपरिषदलार्इ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तार गरी ६ सदस्यीय बनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार सुदर्शन बराललार्इ सामाजिक विकास मन्त्रालय, लिला गिरीलार्इ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आरती पौडेललार्इ भूमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जिम्मेवारी दिएका छन् । तिनै मन्त्रीले पद शतथा गाेपनियताकाे सपथ पनि लिएका छन् ।
थपिएकामध्ये बराल नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् भने गिरी र पौडेल नेकपा एमालेका हुन् । बराल गुल्मी १ क बाट, गिरी रुपन्देही २ क बाट र पौडेल बाँके १ ख बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले सोही दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र एमाले बैजनाथ चौधरीलाई समावेश गरी ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारका नाममा आसन पाएपनि ‘शासन’ गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेशमा प्रर्याप्त पूर्वाधार नभएको र कानुन समेत बनाउन बाँकी रहेकाले अहिले प्रदेश सरकार आसनमा बस्ने काममा मात्रै सीमित भएको उनले बताए ।